Puntland oo jawaab aad u culus ka bixisay hadalkii shalay kasoo yeeray maamulka Galmudug (DHAGEYSO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Puntland oo jawaab aad u culus ka bixisay hadalkii shalay kasoo yeeray maamulka Galmudug (DHAGEYSO)
Maamulka Puntland ayaa jawaab culus ka bixiyay war-saxaafadeed maalintii shalay kasoo baxay maamulka Galmudug, kaas oo looga hadlaayay in xayiraadda ganacsi iyo kala daadsanaanta bulshada labada maamul ay Puntland ka dambeeyso.
Wasiirka warfaafinta ee maamulka Puntland Maxamuud Soo-Cadde oo wareeysi siiyay idaacadda laanta afka Soomaaliga ee VOA-da ayaa si carro leh uga jawaabay hadalka Galmudug, wuxuuna sheegay in qorshaha Puntland ay gaadiidka ku baareyso uusan ahayn mid ganacsiga lagu xanibaayo, balse uu yahay mid ammaanka Puntland loogu daneynayo.
“Runtii cabashada Galmudug waxaan u aragnaa inaysan ahayn mid jirto, maxaa yeelay go’aanka Puntland ay gaartay ma ahan mid lagu xumeeynayo Galmudug ama koonfurta Soomaaliya, balse wuxuu yahay mid loogu daneynayo shacabka Puntland, maadaama qaraxii ugu dambeeyay ay ku dhinteen dad masaakiin ah oo Soomaaliyeed aan waxba galabsan” Sidaas waxaa yiri wasiirka warfaafinta maamulka Puntland Maxamuud Soo-Cadde.
Dhinaca kale, waxa uu wasiirka sheegay in Puntland ay aaminsan tahay gaadiidka ka imaanaya koonfurta dalka Soomaaliya kadibna soo mara deegaanada Galmudug ay ku dhex dhuuntaan Al-shabaab islamarkaana ay Puntland xaq u leedahay inay arrinkaasi ka hortagto.
“Waxaa jira in rag Al-shabaab katirsan oo kusoo dhex dhuumanaya gaadiidka ka imaanaya koonfurta Soomaaliya, islamarkaana soo mara deegaanada Galmudug, waxayna markaasi kadib usoo gudbaan Puntland iyagoo aanan wax baaritaan ah lagu soo sameynin, marka Puntland xaq bay u leedahay inay ammaankeeda iyo kan shacabkeedaba ilaalsato oo ay gaadiidkaasi baaritaan ku sameyso” Ayuu hadalkiisa raaciyay wasiirka warfaafinta ee Puntland Maxamuud Soo-Cadde.
Wasiirka ayaa dhinaca kale sheegay in qaraxyaddii dhawaan ka dhacay deegaanada Puntland ay ku qab-qabteen dambiilayaal ka yimaaday deegaanada ku yaala koonfurta iyo bartamaha dalka Soomaaliya, sidaas awgeed ay waajib tahay in gaadiidka ka imaanaya goobahaasi ee soo mara Galmudug baaritaan lagu sameeyo.
“Sidaad la socotaan dhawaan waxaa qeybo ka mid ah Puntland ka dhacay qaraxyo ay dad waxyeelo kasoo gaartay, waxaana qaraxyadaasi loo qabtay danbiilayaal badan oo dhammaantood ka yimid koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, waxayna badankooda deegaanadda Galmudug iyagoo aan wax baaritaan ah lagu sameynin” Sidaas waxaa yiri wasiir Soo-Cadde.
Si kastaba ha ahaatee, hadalkaan kasoo yeeray wasiirka warfaafinta ee maamulka Puntland Maxamuud Soo-Cadde ayaa kusoo beegmaya xilli shir ay maalintii shalay isugu yimaadeen golaha wasiirada ee maamulka Galmudug loogu dooday xanibaada baahsan oo ay Puntland kusoo rogtay gadiidka ka imaanayay koonfurta iyo bartamaha dalka Soomaaliya, iyagoo sheegay in arrintaas ay cawaaqib xumo ka dhalan karto.